5877 responded out of 22039 polled
သူငယ်ချင်းတို့ ရပ်ရွာမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်အတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိရေး အတွက် အောက်ပါတွေထဲက ဘယ်အရာတွေကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလဲ ?
သူငယ်ချင်းတို့ ကျောင်းမှာဆိုရင်ရော လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်အတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိရေး အတွက် အောက်ပါတွေထဲက ဘယ်အရာတွေကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလဲ ?
သူငယ်ချင်းတို့အိမ်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်အတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုက်ညီမှုရှိရေး အတွက် အောက်ပါတွေထဲက ဘယ်အရာတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသလဲ ?
သဘာဝဘေးတွေကနေ လုံခြုံစေဖို့အတွက် အောက်ဖော်ပြပါဆောင်ရွက်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေထဲက ဘယ်အချက်ကို အလုပ်သင့်ဆုံးလို့ထင်ပါသလဲ။
သူငယ်ချင်း ဆန်ဒိုင်းမူဘောင် (Sendai Framework) နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိပါသလား
အကယ်၍သူငယ်ချင်းသာ အခွင့်အရေးရမယ်ဆိုရင် သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးလုပ်ငန်းတွေ အကောင်အထည်ဖော်တဲ့နေရာမှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ချင်ပါသလား။
၁၈နှစ်အောက် ကလေးသူငယ်တွေအနေနဲ့ သဘာဝဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့နဲ့ သဘာဝဘေးဒဏ်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရှိဖို့ ဘာတွေဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ထင်ပါသလဲ။
852 responded out of 921 polled
5139 responded out of 5444 polled
706 responded out of 735 polled
4722 responded out of 4908 polled
သတိပေးချက်များအား ရုပ်သံ၊ ရေဒီယိုမျာ
256 responded out of 269 polled
4512 responded out of 4606 polled
38 responded out of 41 polled
4389 responded out of 4465 polled
4308 responded out of 4355 polled
3055 responded out of 3682 polled